Debian iyo Fedora waxay isku dayayaan inay wax ka qabtaan dhibaatada ku tiirsanaanta | Laga soo bilaabo Linux
Noocyada isku xidhka ah ayaa dhibaatada ka sii daraya: maktabad maktabaddu waxay u baahan kartaa hal nooc oo ah ku tiirsanaanta si ay u degto, mid kalena wuxuu u baahan karaa mid kale.
Mashaariic badan ayaa u baahan noocyadii ugu dambeeyay ee maktabadaha inay shaqeeyaan, oo aan had iyo jeer la kulmin shuruudaha xasilloonida qaybinta (horumarka isdaba jooga ah waxaa lagu dhaqmaa nidaamka deegaanka ee Node.js iyadoo la adeegsanayo noocyadii ugu dambeeyay ee qaabdhismeedka, qaybintana waxay u baahan tahay taageero dhowr sano ah).
Isku dayga lagu xallinayo noocyada xirmada ee qaybinta oo keliya horseed u noqoshada kordhinta noocyada duugoobay keydka oo aan dib loo cusbooneysiin sanado. Joojinta dayactirka hal xirmo ayaa si xun u saameysa xirmooyin kale oo badan waxayna abuurtaa xitaa dhibaatooyin badan.
Intaas waxaa sii dheer, lku tiirsanaanta iskutallaabta u horseeda xaqiiqda ah in maktabado badan oo ka mid ah Node.js wuxuu noqdaa wax aan macquul aheyn in nidaamka laga tirtiro, taas oo, markaa, kaa horjoogsanaysa inaad ka saarto barnaamijyada kale ee Node.js.
Si loola tacaalo xaaladdan, mashruuca Fedora ayaa dhawaan ansixiyay qorshe lagu joojinayo sameynta xirmooyinka kala duwan ee leh maktabadaha loo adeegsado mashaariicda ku saleysan Node.js.
Wuxuu go'aansaday, isagoo ka bilaabaya Fedora 34, inuu bixiyo oo keliya xirmooyinka aasaasiga ah ee Node.js oo leh turjumaan, madax, maktabadaha aasaasiga ah, binaries, iyo qalabka maaraynta xirmooyinka aasaasiga ah (NPM, dun).
Codsiyada keydka Fedora ee adeegsada Node.js, waxaa loo oggol yahay inay ku darto dhammaan kuwa ku tiirsan ee ku jira xirmo, iyada oo aan loo kala qaybin oo aan la kala soocin maktabadaha loo adeegsaday xirmooyin kala duwan.
Ku darsiga maktabadaha ayaa ka takhalusi doona xirmooyinka yar yar ee xirmooyinka, fududeynaya dayactirka xirmada (horay dayactiraha ayaa waqti badan ku qaatay dib u eegista iyo tijaabinta boqolaal xirmo oo leh maktabado marka loo eego xirmada ugu weyn ee barnaamijka), ka badbaadinta kaabayaasha dhibaatooyinka maktabadaha iyo xallinta arrimaha la xiriirinta noocyada maktabadda (dayactirayaasha waxaa ku jiri doona noocyo la tijaabiyey iyo wax soo saar la tijaabiyey oo ku jira xirmada).
Hoos udhaca isdhexgalka wuxuu noqon doonaa dhibaatada nidaamka keenida sixitaanka u nuglaanta maktabadaha, taas oo u baahan doonta shaqo isku dubaridan oo ka socota dayactirka dhammaan baakadaha oo ay ku jiraan maktabadda nugul. Waxaa jira khatar ah in xirmo ay iloobi doonaan inay cusbooneysiiyaan maktabad dhisme liita isla markaana xirmada aan la ogaan doonin.
Soosaarayaasha Debian sidoo kale waxay kahadleysaa u wareejinta qaab isku xirnaan ku tiirsan xirmo isku mid ah. Marka lagu daro Node.js, dooddu waxay taabaneysaa abuurista xirmooyin loogu talagalay barnaamijka Kubernetes iyo mashaariicda ku qoran luqadaha PHP iyo Go, kuwaas oo ay jirto u janjeera in loo qaybiyo ku-tiirsanaan yar. Weli wax go’aan ah lama gaarin, laakiin waxaa la rajeynayaa in dhibaatada waqtiga ka dib ay ka sii dari doonto oo goor dhow ama goor dambe mashruuca lagu qasbi doono inuu wax qabto.
Gsa (Kaaliyaha Amniga ee Greenbone) isku xirka gvm (Maareynta nuglaanshaha Greenbone) qalabka wax lagu baaro ayaa tusaale loogu soo qaatay dhibaatooyinka ay hayaan dayactirayaashu leeyihiin.
Nooca loo yaqaan 'Debian-la geeyay' ee gsa wuxuu noqday mid aan la jaan qaadi karin noocyada cusub ee gvm, laakiin suurtagal ma ahayn in cusbooneysiinta gsa nooca hada jira maadaama ay kujirto isbadalo muhiim ah waxayna isticmaashaa npm si loo soo dejiyo maktabadaha loo baahan yahay ee Node.js.
Maktabadaha la codsaday aad ayey u tiro badan yihiin waxayna u baahan yihiin abuuridda xirmooyin cusub oo Debian ah si qof uu u ilaaliyo, maaddaama xeerarka Debian ay mamnuucayaan in la rakibo qaybo dibedda ah inta lagu jiro howsha dhismaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Debian iyo Fedora waxay isku dayayaan inay wax ka qabtaan dhibaatada ku tiirsanaanta
Kala qaybsanaanta qaabdhismeedka iyo maktabadaha ku jira ECMAscript ayaa ka baxday gacanta.